'यो नेपालको मात्र समस्या होइन'
२९ जुलाइ २०१५मा दिल्ली महिला आयोगकी अध्यक्षको पदभार संभालेकी मालिवालको तीन दिनपछि समयावधि पुरा हुँदैछ । तर दिल्ली सरकारले उनको कार्यकाल पून तीन वर्षकोलागि थपेको छ । १६ नेपाली चेलीहरुको उद्धार गरेकी मालिवालसँग अन्नपूर्णकर्मी आशा थपलियाले गरेको छोटो कुराकानी
तस्करी भएर आउने नेपाली चेलीहरुको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
तस्करी भएर आउने नेपाली महिलाहरु निकै सोझा हुन्छन्, धेरै पढेलेखेका हुँदैनन् । गरीबीको कुचक्रमा फँसेका हुन्छन् । कहाँ जाँदैछु , किन जाँदैछु, कसले लिएर जाँदैछ भन्ने बारेमा केहि थाहा हुँदैन । भर्खरै गरिएको १६ जनाको उद्धारका क्रममा भेटिएका किशोरी तथा महिलाहरु अधिकाँशले भुकम्पपछि घर भत्कियो , केहि बचेको छैन् , खान लाउन पुगेन त्यसैेले जागीर खोज्ने क्रममा आएको बताएका छन् ।
यसमा नेपाल सरकारले मुख्य रुपमा दुइ वटा विषयमा काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । गरीबीको समस्याबाट उनीहरुलाइ निजात दिलाउन मुलुकमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ र उनीहरुलाइ सचेत बनाउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ । दो श्रो, सोझा साझा महिलालाइ फकाइ फुल्याइ तस्करी गर्ने तस्करहरुलाइ पक्राउ गरेर कडा भन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ ।
नेपालको मात्रै हो कि यो समस्या ?
होइन् , विकासोन्मुख मुलुकहरुमा पनि मानव तस्करी हुन्छ । यो विश्वव्यापी समस्या हो । यसलाइ विश्वमै संगठित अपराध मानिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको भने समस्या समान छ । नेपाल र भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो नेपालको मात्रै समस्या भने होइन । जीबी रोडका कोठीमा भारतीय चेली भेटिन्छन् । नेपाली चेली पनि छन् । दक्षिण एशियाको सन्दर्भको कुरा गर्दा बंगलादेश र पाकिस्तानबाट पनि तस्करी हुन्छन्, तर खुलासीमानाकाका कारण भारतमा नेपालबाट सबैभन्दा बढि तस्करी भइरहेको छ ।
नेपाली चेलीहरुको तस्करी किन सजिलो भएको हो ?
यस्ता तस्करीमा ठूलो गिरोह नै संलग्न छ । नेपाली चेलीहरुलाइ दिल्लीसम्म ल्याइपुरयाउन त खुलासीमा नाका नै काफी छ । दिल्लीबाट बाहिर पठाउनकाागि भने पासपोर्ट लगायतका अन्य कागजातहरु सबै नक्कली तयार पारिन्छन् । त्यसमा नेपाली दूताबासबाट दिइने अनापत्ति प्रमाण पत्र (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी)को अनिवार्यताका विषयमा एक पटक पूर्नविचार गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । किनकी दूताबासको एनओसी एउटा पुख्ता कागजात मानिन्छ । र तस्करहरुले यो कागजातको पनि नक्कली कपी सजिलै तयार पार्छन ।
नेपालका सम्बन्धित निकायसँग तपाइको कुराकानी भएको छ?
पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग भेटेर यी विषयमा छलफल गरेको थिए । तर अब यो घटनापछि म नेपाली दूताबाससँग फेरि पनि भेटने समय माग्छु । उद्धार गरिएका यी नेपाली चेलीहरुलाइ नेपाल फर्काउन तथा उनीलाइ सुरक्षित गृह दिनकालागि नेपाली दूतावासको मदत आवश्यक हुन्छ । उनीहरुलाइ पून फर्केर आउन नपर्नेगरि व्यवस्था गराउनकालागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु । नेपाल र भारत सरकारले मिलेर संयुक्त रुपमा तस्कर र तस्करी विरुद्ध काम गर्नुपर्छ । दिल्ली मानव तस्करीकोलागि श्रोत र गन्तव्य दुबै बन्दै गएकोे छ । त्यसैले यसको नियन्त्रणकोलागि यहाँको केन्द्र सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छु ।